B2C Ahịa Ahịa na 2013 | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 17, 2013 Sunday, October 13, 2013 Douglas Karr
Companieslọ ọrụ azụmahịa na ndị ahịa (B2C) na-ebugharị ahịa ọdịnaya dị ka akụkụ bụ isi nke atụmatụ ahịa ha. Ihe omuma ihe omuma a na egosi ihe ndi ozo, tinyere otutu ebumnuche, ngwa nkwalite kachasi nma, usoro na okwu ikpe ole na ole.
Ndị na-ere ahịa na-eji azụmaahịa ọdịnaya na-emewanye ka ndị ahịa jiri ihe ndị na-adọrọ adọrọ na-akụzi, na-agwa ha ihe, na-eduzi ha ma na-eduzi ha na njem ịzụta ha. Ọ dị mkpa ịkwaga na ụzụ ahụ ma lelee ihe ndị ahịa anyị na-eme dị ka ụlọ ọrụ iji mụta isi ihe na usoro ihe ịga nke ọma. Neil Bhapkar, VP nke ahia na Uberflip
Uberflip awade di na nwunye nke ọdịnaya ahịa nyiwe. Akwụkwọ mpempe akwụkwọ nwere ike gbanwee gị PDFs ka mmekọrịta peeji tụgharịa ahụmahụ. Ọmarịcha akwụkwọ, akwụkwọ ọcha, akụkọ na akwụkwọ akụkọ. Na Ndị agha weta ọdịnaya gị niile n'otu usoro, na-anabata ma na-etinye aka na njedebe na-enweghị mmemme achọrọ.
Tags: b2cazụmahịa na ndị ahịacontent Marketinguberflip